आफ्नै घर अगाडिको आगनमा खन्दा…. - Kohalpur Trends
आफ्नै घर अगाडिको आगनमा खन्दा….
तर जब उक्त दम्पत्तीले बाकस खोले र देखो पुराना गरगहना तथा बहुमूल्य बस्तुले भरिएको । बाकस फेला पारेका जवाहारात र उनकी पत्नीले उक्त बाकस चो’ री भएको हुन सक्ने आशंका गरेर प्रहरीमा खबर गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुको हो श उ’ ड्यो । उक्त बाकसभित्र भेटिएको झोलामा धेरैजसो सुनका सिक्दा तथा सिक्री फेला परेको बताइएको छ । उक्त बाकसभित्र भएको उक्त बस्तुको मूल्य करिब ५२ हजार डलर भएको अन्तराष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
टर्कीका एक अवकाशप्राप्त हुलाकी र सेता हाँसबीचको मित्रताको कथा झन्डै ४ दशकदेखि प्रसिद्ध छ र उनीहरुको मित्रताले दशौं लाखको मनलाई पगालेको छ । १९८४ मा जब रेसेप मिर्जानले घा’ इते हाँसलाई इर्डिने प्रान्तमा भेटेका थिए, त्यतिबेला यही हाँस आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साथी बन्नेछ भन्ने उनलाई हेक्का थिएन । साथीहरुको समूहमा कारमा हिडिँरहेका बेला खाली मैदानमा पखेंटा भाँचिएको हाँसमा रेसेपको नजर गयो । रेसेपलाई लाग्यो कि यस हाँसलाई यत्तिकै छाड्नु भनेको अन्य जनावरको आराहा बन्न दिनुु हो ।
त्यसैले उनले कार रोके र हाँसलाई आफूसँगै राखे । त्यसपछि घर लगेर यस हाँसको उपचार गरे । ‘मलाई लाग्यो कि फ्याउरोको आहारा बन्न दिनुुभन्दा यसलाई मैले घर लग्नु ठिक हुन्छ । घर ल्याएपछि हामी एकअर्कासँग परिचित भयौं र कहिल्यै अलग भएनौं,’ एशोसियट प्रेससँगको कुराकानीमा रेसेपले भने । रेसेपका अनुसार यो पोथी हाँसले आफ्नो भाँ’च्चि’ एको पखेंका ठिक भएपछि पनि उडेर जान मन गरेन । बरु, रेसेपको फार्ममै रहेका अन्य जनावरहरुसँग घुुलमिल भएर यही बस्न थाल्यो । ग्रिससँग सीमा जोडिएको कारागाक क्षेत्रमा रेसेपको फार्म छ, जहाँ उनले अन्य जनावर पनि पालेका छन् । यो हाँस यही फार्म वरपर डुल्दछ र रेसेपले यसलाई गारिप नाम दिएका छन् ।
Previous Previous post: आफ्नै घर अगाडिको आगनमा खन्दा भेटियो यस्तो बस्तु, त्यो भित्र खोलेर हेर्दा उ’ ड्यो हो श
Next Next post: कोरोना खोपको दोस्रो मात्रा ८ हप्तामा दिइने